ခလေးဗျောက်သောက် ကျွေးမလောက်.. Stop | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ခလေးဗျောက်သောက် ကျွေးမလောက်.. Stop
ခလေးဗျောက်သောက် ကျွေးမလောက်.. Stop
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on May 31, 2013 in Myanma News, Opinions & Discussion | 25 comments
ရခိုင်ပြည်နယ် ဗူးသီးတောင်၊ မောင်တောမြို့နယ်တွေမှာ ဘင်္ဂါလီများ ခလေးနှစ်ဦးထက် ပိုမမွေးရ ထုတ်ပြန်တဲ့ အမိန့်ကြောင့် ပူညံပူညံ လတ်တလော ဖြစ်နေတာ ကြားမိဂျမှာပေါ့။ ပြောရတော့ ခက်သားဗျ.. လူ့အခွင့်အရေး ရှုဒေါင့်ကကြည့်ရင် ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူး၊ ဒါကြောင့်ပဲ ဒေသန္တရအမိန့်ဆိုပြီး အတက်အဆုတ်လွယ်အောင် လုပ်ထားတာ။ နိုင်ငံတကာဖိအား သိပ်များလာတော့ အစိုးရက ပြန်စဉ်းစားပါ့မယ် ဖြစ်လာရပြီ။ အန်အယ်လ်ဒီ ဘွားဒေါ်ဂျီးဖက်က ကြည့်ပြန်တော့လည်း ဒီလိုမျိုးကိစ္စမှ ငြိမ်နေလို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကိုယ်တိုင်က မိန်းမသား၊ ခလေးအမေတဦး၊ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် တယောက်အနေနဲ့ ကျင့်ဝတ်ပိုင်း၊ သိက္ခာပိုင်း၊ အချက်အလက်ပိုင်း ဘယ်ဖက်ကမှ ပြေးမလွတ်ဘူး.. ဒီတော့ ဆန့်ကျင်ကြောင်း ပြောရပြီပေ့ါဗျာ..။ နားလည်နိုင်ပါတယ်…။
မွေးဖွားနှုန်း ကန့်သတ်မှုကို လက်မခံဆိုရင် ဘင်္ဂါလီဦးရေ တိုးပွားနှုန်းကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ကြ မလဲ.. ဘယ်သူ တာဝန်ခံမလဲ အဖြေရှာဖို့ ပဲရှိတယ်။ အခုဟာက သူတို့ရဲ့ ခလေးမွေးနှုန်း၊ လူဦးရေစာရင်းတွေသည် ပါးစပ်ပြော ဖြစ်နေတယ်၊ အများပြည်သူကို တင်ပြတာ မတွေ့ရဘူး။ အချက်အလက် ပြည့်စုံမှ ဆွေးနွေးလို့ ဖြစ်မှာပေါ့…။ ပြည်သူဆီကလာတဲ့ ခံစားချက် အကြံပြုချက်များသည် ပြည်ပဖိအားကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖို့ လုံလောက်တဲ့အား ဖြစ်ပါမယ်။ စစ်အစိုးရခေတ် ကြံဖွတ်လူထု စည်းဝေးပွဲတွေလိုတော့ လုပ်နဲ့ပေါ့ဗျာ..။
သတင်းတွေမှာဆိုတာ မွတ်ဆလင်ဦးရေသည် တိုင်းပြည်လူဦးရေရဲ့ ၄%ရှိသတဲ့။ စုစုပေါင်း သန်း၆ဝရှိတယ်ဆို ၂.၄သန်းရှိတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ် စာရင်းပါ ထည့်ယူသလား မရှင်းဘူး။ ပါတယ်ဆို လက်ရှိမှာ တသန်းခွဲ ပြည်တွင်းရောက်နေပြီ၊ နောက်ထပ်တသန်း ဝင်လာရင်…. …။ လဝက ဌာနချုပ် စာရင်းထဲမှာ ဘယ်နှစ်ယောက် ပြသလဲ.. ပြည်နယ်၊တိုင်းနဲ့ ကွပ်ကဲရေးရုံး စာရင်းတွေနဲ့ ဘယ်လောက်ကွာသလဲ…။ မလိမ်ကြေး မညာကြေးဗျာ သမိုင်းတရားခံ အဖြစ်မခံဂျပါနဲ့..။ မြို့နယ်ရုံးတွေက လာဘ်ယူပြီး ထုတ်ပေးထားတဲ့ မှတ်ပုံတင်ကတ်တွေရော.. နှစ်ပေါင်းများစွာ ရုံးချုပ်နဲ့ ပေါင်းရိုက်ပေါင်းစား တချို့လည်း ဝန်ထမ်း သက်သာချောင်ချိရေး ခေါင်းစဉ်အောက် ခွင့်ပြုချက်ယူ လုပ်တယ်လို့ သံသယဖြစ်ဖွယ် များစွာရှိနေတယ်။ ဒီအရေး ပေါ့သေးသေး မတွက်နဲ့နော်… မျိုးဆက်တဆက် နှစ်၂ဝအတွင်းမှာ မြန်မာပြည် နိုင်ငံရေး၊ လူမှုစီးပွားပုံရိပ် ကပြောင်းကပြန် ဖြစ်သွားမှာ….။
နားလည်သလောက်တော့ အဲဒီဥပဒေ ဟိုးအရင်ခေတ်ထဲက ရှိပေမဲ့ မကြပ်မတ်နိုင်လို့ သက်ရောက်မှု မရှိဘူး..။ လိုရင်သုံးဖို့ ချထားတဲ့ အဟန့်အတား လောက်သာ ဖြစ်နေတယ်။ ယူအန်လို တတိယအဖွဲ့အစည်းတွေကနေ ထောက်ပံ့တယ်။ အလှူရှင် ဘယ်သူလဲ.. ဗျူရိုကရေစီယန္တရား သိပ်ကြီးတဲ့ ယူအန်လိုအဖွဲ့မျိုးမှာ သိရန်မဖြစ်နိုင် သလောက်ပဲ။ စာရွက်ပေါ်မှာတော့ ရှိမှာပေါ့ဗျာ.. တကယ်နောက်ကွယ်က ပေးသူကို ရှာဖို့မလွယ် ပြောတာပါ။ သတင်းတခုမှာဆိုတာ ခလေးမွေးရင် အထောက်အထားပြ အန်ဂျီအိုပေးတဲ့ ထောက်ပံ့ပစ္စည်း သွားထုတ်ယုံပဲ။ သားဆက်ခြား ပညာပေးရေး လုပ်ကြပါလိမ့်မယ် သို့သော် အောင်မြင်မှု ရှိမရှိ မသိရဘူး…၊ အစိုးရနဲ့ အန်ဂျီအို ဘယ်သူမှန်လို့ ဘယ်သူမှားလဲ ပွင့်လင်းမှု မရှိတာ ပြသနာ ဖြစ်နေတယ်
ကာတွန်း – အောင်မော်
ခလေးမွေးနှုန်း ကန့်သတ်တာ မှားတယ်ဆိုရင် ကြိုက်သလောက် မွေးခွင့်ပြုထား၊ မွေးတိုင်း ထောက်ပံ့နေတာလဲ မမှန်လို့ ထင်တာပဲ။ စင်ကာပူမှာ တချိန်က ခလေးနှစ်ယောက် ပိုမယူရ ဥပဒေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ တရုတ်မှာ ခုချိန်ထိ တအိမ်ထောင် ခလေးတယောက် ပေါ်လစီရှိတယ်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဝေဖန်မှုများ ရှိပေမဲ့ သိပ်မထိရောက်ဘူး။ စင်ကာပူဆိုရင် သင့်တော်ပြီ ယူဆတဲ့ အချိန်ရောက်မှ ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်တယ် ထင်တယ်။ ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံ ဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်။ ခြောက်ပစ်ကင်း သဲလဲစင်တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒါထက်ကောင်းတဲ့ နည်းရှိရင်လည်း စဉ်းစားတာပေါ့။
အခွင့်အရေးနဲ့အတူ တာဝန်ယူမှု တွဲဖက်ထားတာမို့ ခလေးနှစ်ယောက် မူဝါဒ ဆန့်ကျင်သူများ ဖက်ကလည်း ရေရာခိုင်လုံတဲ့ အကြံပြုချက် တင်ပြပါ။ ဒါမှ မူရင်းနိုင်ငံသားများဖက်က ကျိုးကောင်းခိုင်လုံ ဆင်ခြင်တုံ တရားနဲ့ ဆုံးဖြတ်လို့ရမယ်။ မွေးသူကမွေးလို့ ပေးသူပေးနိုင်ပေမဲ့ လက်ခံထားသူဖက်က မတတ်နိုင်ဆိုရင် အမုန်းတရား အခြေမခံဘဲ နှစ်ဖက်အကျိုးစီးပွား အရင်းတည် အဖြေရှာမှ အဆင်ပြေမယ်။ အဲဒီအတွက် လိုအပ်နေတာ တိကျ လုံလောက်တဲ့ သတင်း အချက်အလက် စီးဆင်းမှုပါပဲ…။
မလိမ်ကြေး မညာကြေး .. မီးရှိုှု့ရေး .
အသံတွေလဲ ထွက်လာရော .. သံတွဲ လဝက ရုံးမီးလောင်လို့ စာရွက်စာတန်းတွေ ကုန်ရော..
ကျွေး မ လောက်
တွေး သ လောက်
ပြေး မ ရောက်
ပေး တစ် ပေါက်
ရေး တစ် ယောက်
အဘွားကလည်း အဘကို ဆဲမှာ ဆဲမှာပဲ ….
ပြည်သူကလည်း အဘွားကို ဆဲမှာ ဆဲမှာတဲ့ ….
ဒီမိုကလည်း ကြံ့ကို ဆဲတာ ဆဲတာ ပဲ….
ဟိုကလည်း ဒေါင်းကို ဆဲဒါ ဆဲဒါ မလွဲ…..
ကျော်က လည်း ဂဇက်ကို ဆဲဘာဒယ် ..ဆဲ ဒယ်…
လူဗျိုဒွေ မိန်းမ မယူရလို့ ကန့်သတ်လိုက်ဂျဘာ ..
ဒါမှ မဟုတ် ..
ကုန်းကုန်း လုပ်ပလိုက်ဂျ ..
ဒါဆို .. အနာဂါတ်မှာ ကလေး မွေးနှုန်း ကျတွားလောက်အိ … ((အထင်))
လဂါး နောက်ထှာ …
ဘာမှ မွေးဖွားနှုန်းတွေ တားမစ် ကန့်သတ်မနေနဲ့။
တော်ကြာ အဲ့နောက်မှာ ကလေးဖျက်ချတာတွေ ဘာတွေနဲ့ လူ အသက်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေ ထပ်ရှုပ်လာဦးမယ်။
အရင် ဘွဘွဂျီး ပါခဲ့တဲ့ ချီးပုံကြီးလည်း ရေမွှေးဆွတ်မနေကြပါနဲ့ဒေါ့။
ခါတော်မှီ ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ တောက်ပတနာဂျီးဟာကို။
အရင် ဘဘကြီးတွေ ထုတ်ပေးထားတဲ့ အိမ်ထောင်စု စာရင်း ကိုင်ဆောင်ထားသူတိုင်းရဲ့ ယောက်ကျားတိုင်းအဟွာကို အကုန်ဖြတ်ပစ်၊ (သားကြော ကို ပေါဒါဘာ)
အဲလာဆို ဘာမှ ငြင်းနေဇာလိုဒေါ့ဘူး။
(__________တွေ ___________တွေကို သတ်ရတာထက် ခက် ရင်တော့မသိဘူး။)
JK ပါခီညော်…။ (ခလက်ဒစ်တူ ကြက်အူလှည့်)
အရင် ဘဘကြီးတွေ ထုတ်ပေးထားတဲ့ အိမ်ထောင်စု စာရင်း ကိုင်ဆောင်ထားသူတိုင်းရဲ့ ယောက်ကျားတိုင်းအဟွာကို အကုန်ဖြတ်ပစ်၊
ညီးးးး အကြံ ပက်စက်လှယီလား ..
အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်မဟဲ့ ဆိုပီး ဂျမခန်ဒါ က ဆြာမဒွေစုပီး စန်ဒပြကုန်မပေါ့ …
P.S ကွကိုယ် ပူလို့ ပျောဒါမဟုတ်ပါ .. ကျုပ် အခန်း ကို Mutter ရောင်းစားလိုက်လို့ သန်းခေါင်စာရင်းလက်မဲ့ ဖစ်နေသူဘာ..
နာ ပေါဒါ အဲ့ ဒေသက သူရို့ ဥပဒေပြဌာန်းမယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေကိုပါ။
ညီးက မဆီမဆိုင် ကျောမချမ်းပါနဲ့။
အဲဒီ ပတာနာဒွေလည်း စိတ်မဝင်စားဘူး။။
အဲ့ လူမျိုးပြုတ်လည်း တောက်ဂရုမစိုက်ဘူး။
ဘွဘွဂျီးဒို့ ဘယ်ဘွရောက်ရောက် အရေးမကြီးဘူး။
ကိုယ် ပါတဲ့ အင်အင်းပုံကို ကိုယ် မရှင်းနိုင်ပဲ သူများခေါင်းပေါ်တင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြလို့ဘာ။
နင့် ဘဝကို တည်ဆောက်ရင်း ငါ့ ဘဝပျက်ရဒယ်…….
ကျုပ် စလုံးမှာအလုပ်လုပ်တုံးက ဘင်္ဂလားတွေပြောပြတာကတော့၊ သူတို့လူမျိုးက များများမွေးရင် ဂုဏ်ရှိသတဲ့။
သားမွေးရင်ခိုင်းစား၊ သမီးမွေးရင်ရောင်းစား အိုစာမင်းစာဖူလုံသတဲ့။
အသက်ကြီးရင် ပိုက်ဆံရှိလူကြီးမင်းလုပ် အငယ်လေးတွေဝယ်စား၊ ကုသိုလ်တောင်ရသတဲ့။
ဆိုတော့… NGOများ ရိက္ခာထောက်၍ ကုသိုလ်ဆက်ကြကုန်….
“““ ဆော်ဒီမင်းသား လဲ မကယ်နိုင် မူစလိမ်များမှိုင် ”””
လားရှိုးမြို ့က အဓိကရုဏ်းမှာ ကိုယ့်အိမ်ကို မီးရှို ့သော မူစလိမ် ကုလားများ ၊ အရင်တုန်းကတော့ ၊ မီးထဲပါ ပစ္စည်းအားလုံးနဲ ့အိမ်တန်ဖိုး ကို စာရင်းပြု ပြီး တင်ရင် ဆော်ဒီမင်းသား က အာရကေ ဆပ်ပလိုင်းခဲ့တာပေါ့ကွယ် ။
မူစလိမ်များခဗျာ.. ရလေ လိုလေ အိုတဆေ ဆိုသလိုလို…
ရှို ့တာ က နဲနဲ ၊ စာရင်းတင်တာက များများ ဆိုတော့
ဆော်ဒီမင်းသား လဲ ချဉ်သွားပါသတဲ့
ကလေးနှစ်ယောက်နှုံးဆိုတော့ သူတို့က တစ်ယောက်ကို
မိန်းမ လေးယောက်ယူကြတာဆိုတော့ တစ်အိမ်ထောင် ရှစ်ယောက်ဖြစ်နေမှာပေါ့နော :bar:
အမှားလား။ အမှန်လားတော့ မသိ။
အဲဒီ မွေးနှုန်း ကန့်သတ် ဥပဒေက ၁၉၉၅ မှာ ထုတ်ခဲ့ဖူးသေးသတဲ့။
ဥပဒေ ကို အထိန်းအသိမ်း တော်သူများ၊ စောင့်ရှောက်တတ်သူများ ပီပီ ဥပဒေပျောက် ခဲ့တာ နေမှာ။
ခလေးမွေးနှုန်း ကန့်သတ်တာ ကို မှားတယ်လို့ မပြောနိုင်ပေမဲ့ နိုင်ငံတွင်းနေသူချင်း အတူတူ သူ့ကျမွေး သူ့ကျ မမွေး နဲ့ ဆိုတာကတော့ နိုင်ငံတကာမှာ မေးငေါ့စရာ ရီစရာဖြစ်မှာပါ။
နိုင်ငံအပြင်ကနေပြီး ပြောတယ်လို့ ပြောလဲ ဆဲလဲ ခံရုံပါဘဲ။
တကယ်လို့ မြန်မာပြည် အရှိန်အဟုန် နဲ့ တိုးတက်ချိန် ပြည်တွင်း နဲ့ ပြည်ပ ဆိုတာ ဘာမှ မကွာတော့ ဘဲ တစ်ရွာထဲ လို ဖြစ်သွား မှာ မို့ အခုထဲ က သူများ နဲ့ ရင်ဘောင်တန်း ဆက်ဆံပြောဆို စဉ်းစားနိုင်ဖို့ လိုတာ သတိပြုဖို့ပါ။
အမှန်တော့ မြန်မာပြည်ထဲ က လူအများစု မှာ ချမ်းသာသူ တော်တော်များများတောင်မှ ကလေး တစ်ယောက် ဆို ရပ်ပြီ။ အလွန်ဆုံး နှစ်ယောက်ဘဲ။
တစ်ချို့ နယ်ဖက်တွေမှာတော့ အသိမရှိလို့ပါ။
ဒီလိုမျိုးတွေ ကို အသိပညာလဲ ထိရောက်အောင် (ထိရောက်အောင် လို့ သုံးတာ ဟန်လုပ်ပြတာ များလွန်းလို့ပါ) ပေး ရင် လိုက်နာဖို့ များပါတယ်။
တကယ်တော့ လဲ ကိုယ်မွေးလာတဲ့ ကလေးကို ဘယ်သူက အငတ်ထားချင်ပါ့မလဲ။
မလိုက်နာရင် တော့ ဥပဒေ အတိုင်းပေါ့။
ဒါပေသည့် တစ်နိုင်ငံလုံး အတွက် တည်မြဲ ရမဲ့ ဥပဒေ ပါ။
ခွဲခြားထားတဲ့ ဥပဒေ မဟုတ်ရပါဘူး။
ဟုတ်မဟုတ်တော့ သေချာမသိဘူး သူများပြောတာကြားတာက
အခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ ကလေးမွေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားပြီး အဲဒီသတ်မှတ်ချက် အတိုင်းမွေးတဲ့ကလေးကို နိုင်ငံတော်က ထောက်ပံတာဝန်ယူမှု့ရှိတယ်လို့ဆိုဘဲ။
ဒီမှာကော အဲလိုကန့်သတ်တာ ကန့်သတ်ချက်အတိုင်း ပြုမူကြတဲ့ ကလေးတွေကို နိုင်ငံတော်က ထောက်ပံ တာဝန်ယူမှာလား?
ပြီးတော့ ကန့်သတ်မှု့ပြုချင်ရင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း နေထိုင်သူ ဒါမှမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေဒေသ နေထိုင်သူ မည်သူမဆို မည်သည့်လူမျိုးမဆို ကန့်သတ်ရမယ်လေ၊ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ ဟိုလူတော့ မွေးရတယ်၊ ဒီလူတော့ မွေးလို့မရ ဆိုတာကတော့ ဥပဒေ အာဏာ တည်ခိုင်းပုံက စနစ်မကျလေရဲ့ပေါ့၊ အဲလို မျက်နှာကြီးဟင်းဖတ်ပါ သတ်မှတ်အုပ်ချုပ်ခဲ့လို့လဲ အခုလို အခြေအနေရှိ ပြည်မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေတာပေါ့လေ။ ဒါလည်းမှတ်သေးပုံ မပေါ်ဘူးဗျ။
အိမ်ထောင်စုတစ်ခုမှာ ကိုယ်ဝင်ငွေ ကိုယ်သုံးစွဲနိုင်မှု့ အခြေအနေကိုလိုက်ပြီး ကလေးမွေးကြတာ အကောင်းဆုံးပါ၊ အဲဒါမှလည်း ကလေး လူကြီး နေထိုင်မှု့အဆင့်အတန်းမှီ ရှိပါလိမ့်မယ်၊ ဆေးပညာ ရှု့ထောက်မှာလည်း မိဘက တတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တောင် သားဆက်ခြားမွေးဖို့ ပညာပေးနေကြတယ်လေ။
ယူအက်စ်မှာ.. တိုင်းပြည်ထဲခိုးဝင်လာတဲ့မိဘတွေကမွေးတဲ့..ကလေးတွေ.. အမေရိကားမြေပေါ်မှာမွေးရင်.. (အခြေခံဥပဒေအရ) အမေရိကန်တန်းဖြစ်တယ်…။
ကလေးငယ်သေးတာ.. အမေရိကန်ဖြစ်နေတာ.. အုပ်ထိမ်းသူမရှိတာ… ဘာမှထည့်မတွက်.. မိတာနဲ့..ထောင်ထဲတန်းထည့်ထားပြီး.. ဥပဒေအရတရားစွဲ.. ပြီးရင်.. ဒီပိုတေးရှင်းပေါ့…။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေဝင်လာတဲ့အခါမှာ.. လူ့အခွင့်အရေးတွေအကုန်.. ပျက်ပြယ်ပါတယ်..။
ဘူးသီးတောင်-မောင်းတောက ကုလားတွေကို တစ်အိမ်ထောင်နှစ်ယောက်ပဲ ခလေးမွေးရမယ်လို ့ကြားရတယ်။ တရုတ်ပြည်မှာလည်း တစ်ယောက်နှုံးပဲလုပ်တယ်။
အလုပ်ဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဘူး။ ဖြစ်တာက မွေးခါစ မိန်းခလေးတွေအသတ်ခံရတယ်။
နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ သူတို ့လုပ်တဲ့ပေါ်လစီက မအောင်မြင်ဘူး။
လာဘ်စားမှု ့ကနေရတကာရှိသလို၊ စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်တာလည်း မလုပ်နိုင်ဘူး။
ဒီတော့ တရုတ်ပြည်ရဲ ့ပေါ်လစီဟာ လေထဲမှာပဲရှိပါတယ်။
တရုတ်လို အဆင့်မြင်တဲ့နိုင်ငံမှာတောင် မအောင်မြင်တာ ရခိုင်ဆိုရင် ပိုဆိုးပဲ။
နှစ်ယောက်မပြောနဲ ့တစ်ယောက်နှုံးလုပ်လည်း အလကားပဲ။
လုပ်သင့်တာက ကုလားနဲ ့ကုလားမတွေကို ဂွေးသင်းထားမှ ရမယ်။ ဘယ်နိုင်ငံမှ မရှိသေးတဲ့ပေါ်လစီပါ။ စမ်းကြည့်စေချင်တယ်။
ဒါတောင်လစ်ရင်လစ်သလို ဂွေးသင်းတဲ့လူတွေကို ငွေပေးအုံးမှာပဲ။
by ကဘုန်းကျော် …
ပြောလည်းပြောတတ်လွန်းလို့ … သဘောကျလို့ မှတ်မိနေခဲ့တဲ့ status လေးပါ … ။
အယ် .. အပေါ်က .. စာက ဘာလို့ ဘလော့ထဲ မပါတာလဲ … အိုက်ဒါယဲ သူ့ အာဘောြ်ဗဲ
တရုတ်ပြည်မှာလည်း တစ်ယောက်နှုံးပဲလုပ် တာ အောင်မြင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခု ဆို စကားတောင် ရှိတယ်။
4 to 1 အချိုး တဲ့။
သဘောက မျိုးဆက် သုံးခု မှာ အဖိုး၊ အဖွား ၊ အဖေ၊ အမေ အားလုံး က ဒီ ကလေး တစ်ယောက် ကိုဘဲ ဝိုင်းစောင့်ရှောက်နိုင်တော့ ကလေးက ပိုပြီး ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နေနေရသတဲ့။
အခုဆို တစ်ရုတ်ပြည်က ကလေးတွေအတွက် နို့မှုန့် ကိုတောင် သူတို့ပြည်တွင်းဖြစ်မဟုတ်ဘဲ ဥရောပက နို့မှုန့် တွေ ဝယ်သွင်းနေလို့ တစ်ချို့ တားတောင်နေရတာ။
ပြီးခဲ့တဲ့ အပါတ်ကတောင် စူပါမာ့ကက်တွေမှာ လူတစ်ယောက် ၂ဗူး ထက်ပိုဝယ်ခွင့်မပေးဘူး။
တရုတ်ဖက်ပို့ဖို့ ဝယ်နေလို့ တဲ့။
သူတို့ က အရင်ထက်ပိုပြီး ချမ်းသာလာတာကတော့ အမှန်ဘဲ။
ကလေးနှစ်ယောက်မွေးဆိုတဲ့ကိတ်စ က ဥပဒေ မဟုတ် ဘူး၊ဒေသန်တရ အမိန့်ပါ၊ဘူးသီးတောင်/မောင်းတောမြို့နယ်ျမားအတွက်သာဖြစ်ါပတယ်၊အဲဒီအမိန့်အတိုင်း မလပ်ုခဲ့တော့ အခု ဘူးသီးတောင်မှာရခိုင် (၇)ရာခိုင်နှန်း၊မောင်းတောမှာရခိုင် (၅)ရာခိုင်နှန်းသာရှိတော့တယ်၊ရခိုင်တွေပြောင်းပြေးရတယ်ပေါ့၊. တရုတ်ကဖိ ကုလားရိ(တရိရိနဲ့အက်စစ်လိုစားတာ)ရှိသည့် မြန်မာ ပင်လယ်ပြာတဲ့၊ကြာရင် မြန်မာတိုင်းရင်သားတွေအါးလုံးပင်လယ်ထဲဆင်းပြေးရလိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်အောင် တတ်နိုင်သမျ တားဆီးရလိမ့်မယ်
မြန်မာနိုင်ငံသားလို့ အသိအမှတ်ပြုပြီလား ဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်း မူတည်သေးတယ်ပြောရမှာဘဲ
တရုပ်မှာဆိုတာက ကလားရောတရုပ်ရော တစ်အိမ်ထောင်ဘယ်နှစ်သား ဆိုပြီး အားလုံးကို
ခုဟာက ကလားမဟုတ်တဲ့ လူတွေကြတော့ ကြိုက်သလိုဆော် ကြိုက်သလိုမွေးကြပြီး
တစ်ညတစ်ခါဆော် စနေတနင်္ဂနွေ နား နှစ်သားကျတာနဲ့ရပ်လို့ သွားကန့်သတ်တော့
ကိုယ်ထုတ်တဲ့ဥပဒေ လီးလိုလိုမှိုလိုဖြစ်နေတာလေးလည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိကြပါဦး
ဘွပု ပြောတဲ့ အတိုင်းပဲကွာ။
ဒီပိုစ့်ကတော့ ပေါင်ဂျားထဲကကို မတက်တော့ဘုစ်..။ကွိကွိ
အောင်ကြူး ပို့ (စ) မို့လည်း အော်ချင်ရာအော်မိတာပါအေ။
တစ်​နိုင်​ငံလုံးတစ်​လင်​တစ်​မယားစနစ်​ကျင်​့သုံးလိုက်​ပါ။​နောက်​တစ်​​ယောက်​ယူချင်​ရင်​ ပထမမိန်​းမက်ို ဥပ​ဒေအတိုင်​း အရင်​ကွာပြီမှ ယူခွင်​့​ပေးပါ။က​လေးကို ကြီးတဲ့အထိ​စောင်​့​ရှောက်​ နိုင်​တဲ့ဥစ္စာဓနရှိသ​လောက်​တာ
ယူခွင်​့​ပေးတဲ့ဥပ​ဒေ ပြဌန်​းပါ။တစ်​နိုင်​ငံလုံး ဒီဥပ​ဒေပြဌန်​းရင်​ လူဦး​ရေပွားနှုန်​း​လျော့ကျ သွားမယ်​ထင်​ပါ​ကြောင်​း အကြံပြုပါတယ်​။ဒီဥပ​ဒေကို လွှတ်​​တော်​မှာအရင်​ တင်​ပြ​ဆွေး​နွေး သ​ဘောတူမှဖြစ်​ပါတယ်​။
ခလေးဗျောက်သောက် ကျွေးမလောက် ဆိုလို့ ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီးအောင်ကျူးတို့ကလေးတွေ ဘယ်လောက်များမွေးထားပါလိမ့်မှတ်တာ။ ကိုရွှေခေါ်တောတို့ပတ်တနာဂိုး။ စဉ်းစားနေဒါ။ သမဒဂျီးကို မကန့်သတ်ပဲ သားကြောဖြတ်ခိုင်းလိုက်လို့ပြောပီး ကန်ထရိုက်ယူရင်ကောင်းမလားလို့ အာဟဲ